CNC Machined Zvikamu, Herb Grinder - HUAYI
OEM Anodized Aluminium CNC machine Zvikamu HYVC0 ...
Mufushwa wefodya (kana kungoti, chigayo) chiumbwe chemagetsi chine zvikamu zvina zvinopatsanuka uye zvine mazino kana hoko zvakarongedzwa nenzira yekuti kana chikamu chepamusoro chashandurwa, zvinhu zvemukati zvakapwanyika.
Chigadzirwa chedu chine mazino akapinza ekugeda akanyatsogadzika kukuya mhando dzese dzemiriwo, kubva pane yakareruka miriwo kusvika kune yakanyanyisa iine zvishoma zvinomonyoroka.
tinogamuchirwa kuboka redu
Huayi International Industry Group Limited (Huayi Group) yakavambwa muna 1988 muHongKong, ndokutanga fekitari yekutanga muShenzhen muna 1990. Mumakore makumi matatu apfuura takaisa mafekitori anopfuura matanhatu muChina mainland: Huayi Precision Spring (Shenzhen) Co., Ltd., Huateng Metal Zvigadzirwa (Dongguan) Co, Ltd., Huayi Kuchengetedza Midziyo (Nanjing) Co, Ltd., Huayi Precision Mould (Ningbo) Co, Ltd., Huayi Steel Tube (Jiangyin) Co., Ltd. , uye Huayi Semi Trailer & Rori (Hubei) Co, Ltd. Isu zvakare tine mamwe mahofisi ebazi muDalian, Zhengzhou, Chongqing, nezvimwewo neiyo inoshanda tenet ye "Yako Target, Yedu Mission", isu takazvipira kupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye mabasa akanaka kwazvo kune vedu vanokudzwa vatengi.
Hazvina mhosva kana iwe uchi vape, kumonera majoini kana kutora bong rips; kana zvasvika pakusvuta fodya, panogara paine chinhu chaunofanirwa kunge uine: chakakodzera kukuya. Heano mapiki edu eakanakisa ekugaya pamusika izvozvi. Hazvina mhosva kuti iwe uri cannabis newbie kana anofarira mwaka kana zvasvika kune ...